Tena miasa ve ny sakafo detox? | Bezzia
Tena miasa ve ny sakafo detox?
Pau Heidemeyer | 07/04/2021 23:55 | sakafo, fahasalamana
Misy sakafo maro ao anatin'ny tontolon'ny sakafo mahavelona, ​​manokana ny tsirairay hahatratrarana tanjona hafa: mampihena ny lanja, mampitombo ny vatan'ny vatana, manatsara ny fahasalaman'ny fo ho an'ny fo, na sakafo tsy misy tavy na sodium.
Etsy ankilany, misy sakafo fihinana detox izay mankafy ny fijerena mahafinaritra. Izy ireo dia mety amin'ny fanadiovana ny vatana ary mazàna manana mpanaraka marobe, anisan'izany ireo olo-malaza.
Alohan'ny hanombohana sakafo dia zava-dehibe ny fahafantarana ny tanjona tiana ho tratrarina, ary amin'ity tranga ity dia tsy maintsy fantarintsika ihany koa ny mety ho loza mety hitranga amin'ny sakafo tiantsika hatomboka.
Betsaka ny sakafo detox, ny sasany dia natao arakaraka ny zava-pisotro, ny anana na ny hafa mifady hanina, ary ny fihinana legioma sy voankazo kely, ary koa famenony sasany.
Sakafo izay manala ny vatana, mamela anao hanaraka drafitra henjana hamoizana haingana, manampy amin'ny fanadiovana ny vatana amin'ny akora simika misy poizina, ary izay mihoatra.
Rehefa miresaka momba ny fanapoizinana ny vatana isika, dia manandrana manala ny vatantsika hanapoizina ireo poizina nangonina taorian'ny fanjifana be loatra ny sakafo voahodina sy ireo loto rehetra amin'ny tontolo iainana izay azonay notsinjovana.
1 Dietox dia mihinana ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
1.1 Fianarana sy sakafo detox
1.2 Ny anton'ny fisakafoanana detox
2 Ahoana ny fiasan'ny sakafo detox
3 Tandremo ny sakafo detox
4 Mihinana salama ary ny vatanao no hanao ny ambiny
Dietox dia mihinana ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
Tokony ho fantatsika ny vokany mety haterak'io karazan-tsakafo detox io. Tokony hotadidina fa ity karazan-tsakafo ity dia mamporisika ny fihinanana sakafo voajanahary, dia asio rano sy legioma betsaka, zavatra mety amin'ny fahasalamanao.
Toy ny sakafon'ny lamaody maro hafa, ny sakafo detox dia mety hisy fiatraikany manimba izay tsy maintsy fantatsika alohan'ny fampiharana azy ireo.
Fianarana sy sakafo detox
Amin'izao fotoana izao dia tsy dia misy fanadihadiana firy mampiseho ny fahombiazany, satria misy ny olona mankasitraka an'ity karazan-tsakafo ity satria manamafy izy ireo fa ny poizina dia tsy mandao ny vatana voajanahary ary mila famporisihana hanampy amin'ny fanadiovana ny vatana.
Ireo olona ireo dia mandinika ny fomba misy ny poizina mijanona ao ny rafi-pandevonan-kanina, ny gastrointestinal ary ny lymphatic systemary koa amin'ny hoditra sy volo ary mety hiteraka havizanana, aretin'andoha ary maloiloy.
Mifanohitra amin'izany no izy, misy ny olona milaza fa esorina voajanahary ny poizina ary tsy ilaina ny manaraka sakafo henjana hahazoana izany.
Ny anton'ny fisakafoanana detox
Ny hevitra fototra ao ambadiky ny sakafo detox dia ny fanomezana karazana sakafo mety misy poizina mandritra ny fotoana iray. Ny hevitra dia ny fanadiovana sy fanadiovana ny vatana amin'ny zavatra "ratsy" rehetra. Na izany aza, ny marina dia ny vatan'olombelona dia novolavolaina miaraka amin'ny mekanisma fanalefahana azy manokana.
Ahoana ny fiasan'ny sakafo detox
Araka ny efa nolazainay, tsy misy ihany ny sakafo detox tokana, samy hafa izy ireo ary ny ankamaroan'izy ireo dia mitaky vanim-potoana fifadian-kanina, izany hoe, ajanony ny sakafo mandritra ny roa andro dia ampidiro tsikelikely ary karazana sakafo sasany tsikelikely amin'ny sakafo.
Sakafo maro toy izany no manolotra fanondrahana kôlônika na «enema» «hanadio» ny tsinay. Ny sakafo hafa dia manome soso-kevitra amin'ny fandraisana fanampin-tsakafo na karazana dite manokana hanampiana amin'ny dingan'ny fanadiovana ny vatana.
Ny fihinanana detox dia afaka misoroka ary manasitrana aretina mihitsy aza mba hanomezana tanjaka na fifantohana bebe kokoa ny olona. Ny fananana ny vatana tototry sakafo "misy poizina" dia hahatonga antsika ho reraka, miadana ary marary andoha.
Zava-dehibe ny fananana sakafo ambany tavy sy be tavy, ka hihazona sakafo mahasalama ary hanome tanjaka bebe kokoa ho an'ireo izay manaraka azy.
Na izany aza, araka ny noeritreretinay mialoha, ny porofo ara-tsiansa dia tsy ampy fa ireo sakafo ireo dia manampy ny vatana hanafoana ny poizina haingam-pandeha na fanesorana poizina, na dia tsy mankarary mihitsy aza ny fanarahana sakafo manome alalana ny vatana haka aina.
Tandremo ny sakafo detox
Betsaka ny olona mino fa raha mihinana sakafo detox izy ireo dia ho very lanja betsaka, na izany aza, tsy tena marina izany ary ny tondrozotra sasany dia tsy maintsy raisina mba tsy hiharan-doza, satria raha tena sakafo henjana tokoa no tanterahina dia mety handoa azy ireo izany.
Ny sakafo detox dia tsy mety amin'ny olona manana aretina sasany. Amin'io lafiny io dia tsy tokony hasaina ho an'ireo olona tratry ny diabeta, aretim-po ary aretina hafa mitaiza. Raha bevohoka ianao na manana olana amin'ny sakafo dia tokony hisoroka ireo karazan-tsakafo ireo.
Ny sakafon'ny detox dia mety hanjary mpidoroka. Izany dia satria ny tsy fahampian-tsakafo na ny fitantanana enema dia miteraka fahatsapana hafa ary angamba olona maro no maniry izany. Ho an'ny olona sasany, ny fahatsapana fanentanana mitovy amin'ilay tsapa amin'ny nikôtinina na alikaola dia tsapa.
Ny fanampin-tsakafo hampihenana ny vatana dia mety hisy vokany hafa. Betsaka ny fanafody famenon-tsakafo ampiasaina mandritra ireo sakafo detox ireo no tena laxatives, ka mahatonga ny olona manana "jams" handeha any amin'ny fandroana bebe kokoa. Mety hisy vokany ratsy eo amin'ny fahasalamana izany, satria ny fanafody famonoana laxative izay fanafody dia mety hiteraka tsy fahampian-drano, tsy fifandanjan'ny mineraly ary koa olana amin'ny rafi-pandevonan-kanina.
Ny sakafo detox dia natao hahatratrarana tanjona fohy. Izy io dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana hafa, ny fifadian-kanina mandritra ny fotoana maharitra dia mety hampihena ny metabolisma olona. Izany dia manamora ny famerenana indray ny lanjany very sy ny fanesorana ny lanja bebe kokoa amin'ny ho avy.
Mihinana salama ary ny vatanao no hanao ny ambiny
Ny fihinanana voankazo sy legioma bebe kokoa no fototry ny fomba fiaina salama. Aza adino ny mandray azy ireo, voankazo, legioma ary fibre amin'ny vanim-potoana, ary koa fisotro rano bebe kokoa. Nefa koa, mila maka antoka ianao fa mahazo ny otrikaina ilainao amin'ny sakafo hafa.
Ny proteinina dia tsy tokony ho tsy ampy, ary koa ny vitamina na mineraly izay tsy maintsy azo avy amin'ny loharano samihafa. Ny zava-dehibe indrindra amin'ny sakafo mahasalama dia ny karazany fa tsy ny fihoaram-pefy, satria na ara-pahasalamana toy inona aza ny sakafo, raha raisina be loatra, dia vao mainka hanimba antsika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » sakafo » Tena miasa ve ny sakafo detox?
Mety hisy ve ny firaisana raha tsy misy ny penetration?
Uterqüe dia manolotra an'i A la Fresca, trano fanontana vaovao SS21